Njengoba kwaziwa kahle isebenze injini budinga nomoya-mpilo kanye nophethiloli. Futhi uma supply lokuqala esanele umfutho womoya, uphethiloli kumele zithunyelwe ngenkani ngumuntu futha. Kungaba zezinhlobo ezahlukene. Ngasekuqaleni izimoto carburetor setha izakhi lokukhanda. Gasoline futha Vaz-2112 - kagesi zanamuhla. Ukuthi isebenza kanjani nokuthi ukulishintsha? Konke lokhu - kamuva kulesi sihloko.
Exhaust kanye valve Solenoid.
Umsebenzi isici akahlukile isimiso isenzo futha lokukhanda. Ngakho, ngenxa core isici izenzo, okuyinto bangena valve Solenoid. Lesi senzo kwenzeka ngaphambi kuze isistimu wavala oxhumana nabo kokunikeza voltage kunethiwekhi. Ingabe yaqala lapho amalungu ukuthungela (Ukujikeleza isikhundla elihambisana ukhiye). Ngakho, ngaleso futha uphethiloli 16 VAZ-2112 12V awanikezwa ukuze valve. Mshini kudala ingcindezi wazifunela ambalwa adingekayo umjovo uphethiloli injector. Qaphela ukuthi izinhloso zokuvikela futha kungenziwa ngokuzenzakalelayo ucishiwe uma isignali sitholwa isiqalo ngempumelelo ukulawula injini iyunithi.
Ngesikhathi ekhishwa inkomba (ingcindezi) ifinyelela 0.4 MPA. Sheer isici design kuyinto Modular. Ngaphezu futha, engeyokuqala kuyinto ingilazi protivootlivnoy, izintambo futhi amashubhu ukuthi zivikelwe entwasahlobo okuqinile.
Ngesikhathi futha has a diaphragm, ezihambayo up and down. Ngenxa yalokho, uhlelo kudala cleaner. Lokhu kusiza kuvulwa valve ukuncela kwe-futha. Phakathi ukunyakaza phezulu diaphragm, ke uvala itheku valve ngaphansi kwengcindezi. Lokhu kuvula isici ukushaywa. Sigqoka ingcindezi fuel phezu injectors. Futhi, uhlelo inikeza "ithangi umugqa." Kuyinto ezingadingekile ngenani ezihlalayo uphethiloli emuva ethangini. Ngoba "ukubuya ukugeleza" imigqa ngabanye anikezwa.
Ngo imodeli wokuqala "amashumi" lokhu futha kuyinto mechanical elise gumbi injini. Kodwa "dvenashka" yavela ngemva kwesikhashana, e-98th futhi kwaba ifakwe injini uphethiloli injected ngokugcwele basakaza umjovo. Ngakho-ke, umklamo isebenzisa ngwenya kagesi fuel futha. On Vaz-2112 injector (valve 8 nengu-16) egcinwe ethangini. Ukuze eqondile, into itholakala ngaphansi irowu ezingemuva umcamelo, ohlangothini lokunene. Ukuze inkonzo zayo ezinobungane enikeziwe dweba ekhethekile. Kungani element alikwazi ku isikimu classical? Iqiniso lokuthi futha kagesi iyasebenza ngesikhathi ingcindezi ephakeme kanye heats ngokushesha. Ngakho-ke, udzinga ezipholile. Ukuze izinkinga Umklamo kurediyetha entsha, onjiniyela, kwanqunywa ukubeka into ethangini. Ngakho, Isibandisi ngokwaso uphethiloli futha. Ngaphezu kwalokho, izinqola zempi bagibele zonke imisindo ezingavela emsebenzini walo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi futha fuel ogibele injector Vaz-2112, has a ukuphila isikhathi eside. Kodwa ogibele njalo ku i tank lingenamuntu futhi zife esikhundleni izihlungi kungaba babhebhethekise umsebenzi wakhe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuba bazi izimpawu eziyisisekelo ukungasebenzi.
Eyokuqala isici uphawu - isiqalo enzima motor. Ngaphezu kwalokho, kungase kwenzeke ngokuthi "i-hot" futhi "ku abandayo". Lokhu kubonisa ukuthi futha kunzima ukuthuthukisa ingcindezi eyanele ngaphambi kokuqala. Kahle kahle, lokhu kuzoba kuphela inikezwe imizuzwana 2-3. Uma futha siyaqhubeka nemicimbi kanye izindlela eminye kukhona valve noma izinkinga diaphragm. Eyesibili sici - isici wesithunywa izimoto. Umshini bazothini ephethe ukulibala kuya isinyathelo igesi. Kuzoba ukwehluleka phakathi ukushesha. Ngezinye izikhathi kukhona nje jerks e-traffic isivinini esitebeleni.
Ekugcineni, motor iyoba idling engazinzile. Kukhona umuzwa wokuthi troit motor. Uma isici futhi ziphele nya, khona-ke lapho ukuthungela ngokuphelele hum kwe-futha kuyoba lingekho (ngisho iDemo).
Ngakho washisa futha, sasithenga entsha futhi uyafuna ukuyifaka. Okokuqala, kudingeka ukunciphisa ingcindezi ohlelweni (hhayi uthele uphethiloli zonke ingaphakathi amashubhu). Ukuze wenze lokhu, uthole fuse esihambisanayo (wesifunda kuboniswa ohlangothini reverse ikhava), ukuqala injini kanye ngesikhatsi operation ukususa lento. Imoto namanje ambalwa ukusebenza, bese iyama. Lokhu kuwuphawu lokuthi uhlelo saphelelwa uphethiloli, futhi singakwazi ukuqhubekela ezilandelayo. Ngakho, vula umnyango ezingemuva futhi ususe kusofa. Ngenxa yalesi cindezela kusuka zombili phezu isiqhebezo ngaphansi kwetafula. Ngaleso sikhathi siyobona dweba encane. Ngaphansi kwalo futhi ifihla likaphethiloli futha Vaz-2112. Sebenzisa ukufakwa kokumqoka kuphela ukuze uyasikrufulula a nezikulufi ezimbalwa bese ukhipha ikhava eceleni. Khona-ke, indandatho Spanner noma ratchet ikhanda uyasikrufulula imishudo ukumpompa ipherimitha. Linani selilonkhe lebantfu labange-8.
Njengoba eminye kuhilela ukwenana futha fuel phezu Vaz-2112? Isinyathelo esilandelayo unqamule ipayipi nophethiloli. Kuye ngohlobo imoto (8- noma 16 valve), angase ogibele chips noma umshudo some. Futhi ukuvimbela chip izintambo. Ukuze ukubekwa uphawu kangcono, iringi iraba inedizayini Modular. Futhi siye futhi lakhishwa. Kubalulekile ukuhlola isimo sayo. Uma sesomile nokusasamba, kuyinto efiselekayo esikhundleni. Uma kungenjalo, zonke intuthu uphethiloli, kukhona ethangini ngeke angena singene gumbi.
Ngakho, ngomusa kukhishwe isakhiwo ethangini. Ukuze ukuliqaqa element ubudala, udinga ukususa protivootlivnoy ingilazi. I futha ngokwawo ngokuqinile Slots phezu latches. Awudingi ukusebenzisa okhiye noma ezinye izinto ukuze uyisuse. Kulula ngokwanele ukuba ukudonsa isandla sakhe usisuse esihlalweni. Futhi esikhundleni reticulum (isihlungi indawo). Yibe usubeka ku okufanayo entsha lento Slots futhi ungakhohlwa ukugqoka inkomishi plastic. ukubeka ngokucophelela zonke ku ethangini uwafake umshudo, uphawu ibutho lonke. Ngo lonke leli esikhundleni usuphothuliwe.
A new futha fuel Vaz-2112 amanani amabanga ruble 1,200 2,000. Ngokuphawulekayo, eshibhe kwaba "Boshevsky" isici. Yiqiniso, akukho muntu oyobe engenawo eJalimane ukwenza amaphampu "dvenashki". Lena inkohliso Chinese ezishibhile. Ngakho-ke kungcono ukuthenga Saratov futha. Kuyoqhubeka isikhathi eside kakhulu kuneminyaka umlingani wakhe. Phawula futhi ukuthi izinto eziningi zitholakala edayiswa module (okuphelele nayo yonke amashubhu, umshini, izinkomishi, njll). Lokhu kakhulu isheshisa inqubo esikhundleni.
Ikhiqiza engena esikhundleni fuel futha phezu Vaz-2112, ukuqinisekisa nokuhlanzeka esiphezulu ikhava isici. Akwamukelekile ukuthi inhlabathi wangena ethangini kuwo. It kalula amaphuzu isihlungi indawo (ngokwengxenye ukuba bangene entsha fuel futha Vaz-2112), yingakho ke kuyodingeka ukulungisa futhi. Sula isiqephu kangcono indwangu iye ofakwe uphethiloli noma "umoya emhlophe".
Ngakho esiphethweni yini okumele uyenze uma imoto Vaz-2112 akusho usebenze futha fuel futhi ngasiphi isizathu lamasu ukucacisa iphutha. Njengoba ubona, ungakwazi ukushintsha cell ngezandla zakhe ebukhoneni iqoqo ubuncane amathuluzi. Ngesikhathi fuel futha esikhundleni kuzothatha imizuzu akukho kuka-40 ngesikhathi. Kuyinto inqubo elula ukuphinda ukuthi ngisho Wabasaqalayo can.
Ukolweni - kuyini? Inani izitshalo ekuphileni kwebantfu